FIKIRKAAGA KA DHIIBO: 5-tan macallin midkee dhibcaha ugu badan la imaan doona Premier League xilli ciyaareedka soo socda? – Gool FM
(England) 27 Maajo 2016. Kaddib Man United oo xaqiijisay maanta in Jose Mourinho yahay macallinkooda cusub, Premier League ayaa noqday meel ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah tababarayaasha ugu fiican adduunka waxa la sugayana waa inay yimaadaan uu laacibiinta ugu fiican adduunka sida, Messi, Ronaldo, Ibrahimovic, Neymar iyo wixii la mid ah.
Jose Mourinho oo horkacaya Man United, Arsene Wenger oo muddo dheer jiidayay Arsenal, Antonio Conte oo boorka ka jafaya Chelsea, Pep Guardiola oo xilka u qaban doona maal qabeenada Man City iyo Klopp oo Liverpool daadihinaya.
Haddaba aqriste tababarahee isleedahay wuu la imaan doonaa dhibacaha ugu badan Premier League kal ciyaareedka soo socda nala wadaag fikirkaaga.
Granit Xhaka oo la shaaciyay lambarka uu u xiran doono Arsenal...(Ma ahan 34)
Koox shidan oo laga sameeyay xiddigaha ka qeyb galaya Euro 2016 + SAWIRRO